ဆေးရုံတက်နေရတဲ့ မိခင်က ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေတဲ့ သမီးလေးကိုအားပေးစကားဆိုလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ ဖွေးဖွေး…. – Cele Oscar
ဆေးရုံတက်နေရတဲ့ မိခင်က ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေတဲ့ သမီးလေးကိုအားပေးစကားဆိုလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ ဖွေးဖွေး….
August 13, 2021 By L YC Knowledge
ပရိသတျတှေ ခငျြခငျအားပေးရတဲ့မငျးသမီးခြောလေး ဖှေးဖှေးကတော့ ရုပျရှငျ ဇာတျကားပေါငျးမြားစှာ ရိုတျကူးခဲ့ပွီး အကယျဒမီ ထူးခြှနျဆုတှေ လညျးရရှိထားတဲ့သူ တဈယောကျပါ။လကျရှိမှာ ဖှေးဖှေး က နှဦေးတျောလှနျရေးကွီးမှာတကျတကျ ကွှကွှ ပါဝငျခဲ့တာဘဲဖွဈပါတယျ။
ဒါကွောငျ့မလို့ ဖမျးဝရမျးထုတျခံရပွီး ထှကျပွေးတိမျးရှောငျနေ တာလညျးဖွဈပါတယျ။ ထှကျပွေးတိမျရှောငျစဉျ ကာလမှာဖှေးဖှေး ရဲ့ အဖှားဖွဈသူလညျးကှယျလှနျခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ဒါအပွငျ လကျရှိမှာ ဖှေးဖှေးရဲ့အမကေဆေးရုံတငျထားရတာဖွဈပါတယျ။ဖှေးဖှေးရဲ့အမကေ သကျသာနပွေီဖွဈပွီးသမီးဖွဈသူဖှေးဖှေးကိုတောငျ စိတျဓာတျမကဖြို့ အားပေးစကားတှေ ပွော ခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
ဖှေးဖှေးကလညျး အမခေဈြသမီးတဈယောကျဖွဈပွီးမိခငျ ကိုလိုလသေေးမရှိပွုစုစောငျ့ရှောကျပေးနတော ဖွဈပါတယျ။ဖှေးဖှေး ရဲ့ အမလေညျးအမွနျဆုံးကနျြးမာပွီးအရငျလိုပြျောရှငျတဲ့ မိသားစုဘဝလေးကို ပိုငျဆိုငျနိုငျပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးပါတယျ။
ပရိသတ်တွေ ချင်ခင်အားပေးရတဲ့မင်းသမီးချောလေး ဖွေးဖွေးကတော့ ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားပေါင်းများစွာ ရိုတ်ကူးခဲ့ပြီး အကယ်ဒမီ ထူးချွန်ဆုတွေ လည်းရရှိထားတဲ့သူ တစ်ယောက်ပါ။လက်ရှိမှာ ဖွေးဖွေး က နွေဦးတော်လှန်ရေးကြီးမှာတက်တက် ကြွကြွ ပါဝင်ခဲ့တာဘဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်မလို့ ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ခံရပြီး ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေ တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ထွက်ပြေးတိမ်ရှောင်စဉ် ကာလမှာဖွေးဖွေး ရဲ့ အဖွားဖြစ်သူလည်းကွယ်လွန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင် လက်ရှိမှာ ဖွေးဖွေးရဲ့အမေကဆေးရုံတင်ထားရတာဖြစ်ပါတယ်။ဖွေးဖွေးရဲ့အမေက သက်သာနေပြီဖြစ်ပြီးသမီးဖြစ်သူဖွေးဖွေးကိုတောင် စိတ်ဓာတ်မကျဖို့ အားပေးစကားတွေ ပြော ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဖွေးဖွေးကလည်း အမေချစ်သမီးတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးမိခင် ကိုလိုလေသေးမရှိပြုစုစောင့်ရှောက်ပေးနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ဖွေးဖွေး ရဲ့ အမေလည်းအမြန်ဆုံးကျန်းမာပြီးအရင်လိုပျော်ရွှင်တဲ့ မိသားစုဘဝလေးကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်။
အိမ်ထောင်စု ( ၅၀ )စာအတွက် လိုအပ်တဲ့ ဆေးဝါးလေးတွေကိုလှူဒါန်းပေးလိုက်တဲ့ ဟိန်းမင်းသူ…